Farmaajo iyo Abiy oo wada-hadallo u tagaya Nairobi
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa la filayaa in goor-dhow ay u amba baxaan magaalada Nairobi, sida lagu sheegay war kasoo baxay Villa Somalia.
Labada hoggaamiye ayaa la sheegay in wadahadallo saddex geesood ah kula yeelan doonaan Madaxweynaha Kenya Mudane Uhuru Kenyatta.
Qoraalka kasoo baxay Villa Somalia ayaa lagu yiri “Wadahadalladii u socday Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa goor dhaw soo gabagaboobay, waxayna isla garteen in soo celinta iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ay muhiim u tahay guud ahaan gobolka.”
Sida lagu sheegay qoraalka, Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo kale isla gartay muhiimadda ay leedahay in dalalka gobolku yeeshaan wadashaqayn xooggan iyo in arrimaha diblomaasiyadeed lagu xalliyo isfaham iyo wadahadal.
Wasiiru dowlaha arrimaha dibedda Soomaaliya, Cabdulqaadir Axmed Kheyr ayaa faah-faahiyey wada-hadalladii Abiy iyo Farmaajo iyo safarka ay u aadayaan Nairobi.
Haddaba si aan arrimahaasi wax badan ugu ogaanno ayuu Jamaal Axmed Cismaan qadka telefoonka ee Kenya kula xiriirey Aadan Makiina oo ah qoraa ka faallooada arrimaha gobolka.
Fallanqeynta xiriirka labada dal